ISimba ichitha eyokufuna uShonga
UJUSTIN Shonga we-Orlando Pirates oke wamataniswa nokufunwa yiSimba Club yaseTanzania Isithombe: BACKPAGEPIX
IZINKUNZI zase-Afrika iSimba Soccer Club (SC) ziyayichitha eyokufuna umgadli we-Orlando Pirates, uJustin Shonga.
USenzo Mbatha, oyisikhulu esiphezulu saleli qembu laseTanzania, wake wasebenza kwiPirates, kanti iqembu lakhe selike lamataniswa nomdlali weBucs kodwa ukuchithile ukuthi bagaqele lo mdlali waseZambia.
UShonga usekuthola kunzima ukuqala imidlalo kwiBucs ngaphansi komqeqeshi uJosef Zinnbauer kule sizini esizosongwa.
Ngesikhathi ekhuluma neSouth African Football Jounalists Association (Safja), uMbatha ucacisile ngoShonga.
“Kunamahlebezi athi iSimba icathamela uShonga, angelona iqiniso. Kunabantu abathile eTanzania naseNingizimu Afrika ababhebhethekisa le ndaba yokuthi iSimba ifuna uJustin Shonga. Njengamanje iSimba ayimfuni uShonga,” kusho uMbatha eseTanzania.
UShonga ufike eNingizimu Afrika ebatshazwa kodwa akakafiki ezingeni abebhekwe ukuthi afike kulona.
“Ungumdlali omuhle kakhulu weZambia. Ngicabanga ukuthi kukhulu angakwenzela iqembu lethu kodwa baningi abadlali abadlala endaweni ayidlalayo. Njengamanje iSimba ayizimisele ngokusayinisa uShonga,” kuchaza uMbatha.
UShonga uhola kahle kwiBucs okuchaza ukuthi iqembu elimfunayo ngeke limthole kalula.
“Kukhona oke wangibuza ngoShonga. Uma ubheka imali ayiholayo kumele ube neqiniso, bese uzibuza ukuthi ungakwazi yini ukumelana nalokho. Asifuni ukuzifaka enkingeni esiyibona kwiligi yethu eNingizimu Afrika,” kucacisa uMbatha.
"Asifuni ukuncintisana nomuntu okhokha u-R100 000 (isibonelo), akekho ofuna ukuqophisana nomuntu onemali eningi. Yilapho inkinga iqala khona. Akumele sijabule sithi sesiyakwazi ukwenza izinto ezinkulu, kube kungenjalo. Kancance kancane sizofinyelela lapho."
Ngesikhathi esasebenza eNingizimu Afrika, uMbatha uke waba yisikhulu kwiPlatinum Stars lapho ewine khona izindebe ezimbili.
“Sonke sishayeke kakhulu kodwa lokho akusho ukuthi ngeke siye emakethe. Ngesonto elidlule sibe nomhlangano sixoxa ngokuthi kumele senzeni,” kwenaba uMbatha.
"Ngemuva kwalokho umbiko uzoya kusihlalo ukuze avume ukuthi sizame ukuthola abadlali abathize esibafunayo. Lokho ngeke kume kodwa kuzoba nzima ukuthi sithole abadlali esibafunayo."
Njengamanje eNingizimu Afrika kubhekwe ukuthi izoqedelwa nini imidlalo ye-Absa Premiership emiswe sekusele kancane kuqedwe isizini ka-2019/2020.